FANATSARANA NY VOKATRA JIROFO : Miverina manavao ireo tanimboly ny tantsaha ao Analanjirofo
Mitana ny anjara toerana lehibe amin’ny toekarana eto Madagasikara ny jirofo, voly fanondrana. 6 avril 2021
Talohan’ny fanjanahantany no fantatra fa efa tafiditra teto Madagasikara ny jirofo. Ireo “Créoles” avy tao amin’ny Nosy La Réunion no nitondra izany teto Madagasikara ny taona 1821. Tao Sainte Marie no nambolena azy voalohany.
Amin’izao fotoana izao, dia mamokatra jirofo 16 000 taonina eo ho eo isan-taona ny ao amin’ny faritra Analanjirofo, araka ny nambaran’ny talem-paritry ny fambolena ao an-toerana Solondaza Ludget. Analanjirofo izay misy distrika enina : Fenoarivo-Atsinanana, Vavatenina, Soanierana-Ivongo, Sainte-Marie, Mananara-Avaratra ary Maroantsetra.
Tantsaha iray manana jirofo 150 fototra
Jirofo iray izay ahazoana vihin-jirofo 10 kg maina eo ho eo. Noho ny filàna eo amin’ny tsena iraisam-pirenena dia roboka ireo tantsaha namboly azy. Taorian’ ny fahazoana ny fahaleovantena kosa vao tena niroborobo fatratra ny fambolena jirofo teto Madagasikara. Lasa kolontsaina mihitsy moa ny fambolena azy raha ny tao Analanjirofo manokana. Rehefa tsy manana foto-jirofo dia lazaina fa tsy lehilahy. Saika mbola ireo jirofo novolena ny taona 1970-1980 no mbola betsaka ao Analanjirofo, ka efa antitra izay lasa mampihena ny vokatra azo.
Miroso tsimoramora amin’ny fanavaozana ny tanimboly ireo tantsaha, tato ho ato mba hampitombo indray ny vokatra. Fahafavaratra no tena fambolena azy, izany hoe amin’ny fotoana be orana. Elanelanina 7 m ny fomba fambolena mba hahafahany mahazo aina sy mora mitombo. Araka ny nambaran’ireo teknisianina, mirefy 40 sm tora-droa kosa ny hangezan’ny lavaka atao azy ary 40 sm koa ny halaliny ary asiana zezika ao ambany. Asiana alokaloka rehefa voavoly mba tsy ho matin’ny hain’andro. Maty ny zana-jirofo mbola vao novelena raha vao mahamay loatra.
Afaka 7 taona aorian’ny mambolena no ahazoana vokatra ny jirofo. Ho an’ireo jirofo efa lehibe kosa dia tokony hodiovina isaky ny roa taona.
Potiky ny fanaovana lasantsin-jirofo
Ankoatra ny rivo-doza, anisany antony mahatonga ny fahapotehan’ny jirofo ny fanaovana lasantsin-jirofo amin’ny ravin-jirofo. Ny ravin-jirofo izay ahazoana lohamenaka na “huile essentielle”. Manodidina ny 40 000 Ariary eo ho eo ny iray litatra amin’ ny lasantsin-jirofo. Miisa 6 500 eo ho eo ny isan’ny lambika ao amin’ny faritra Analanjirofo amin’izao fotoana izao. Lambika izay sady mamotika ravin-jirofo no ilana hazo maro ny fandrahoana azy ka mahatonga fikapana ala. Ny fanamboarana ravin-jirofo 6 litatra dia ilàna hazo 6m3. Ny olana na dia efa misy voany aza ireo jirofo dia mbola misy sahy maka ihany ny raviny hanaovana ny lasantsin-jirofo noho izy io lazain’izy ireo fa “vola malaky”.
Mbola ady goavana atrehin’ny faritra Analanjirofo amin’izao fotoana izao ny fanentanana ireo tantsaha any ambanivohitra mba tsy hanimba jirofo amin’ny lasantsin-jirofo fa tena mampihena ny vihin-jirofo azo tokoa izany. Manambara ireo mpamboly jirofo matihanina fa rehefa misangotra jirofo dia tsy tokony folahina ny tahony mba tsy hanimba ny taom-piotazana manaraka. Amin’izao fotoana izao, dia ao anatin’ny fametrahana politika manokana entina hampiroboroboana ny voly jirofo indray ny ao amin’ny faritra Analanjirofo. Miroboboro ny famokarana zana-jirofo izay miparitaka amin’ny distrika enina.
Manatona ireo tantsaha eny ifotony ireo teknisianina avy amin’ny fambolena manome toromarika amin’ny fambolena manara-penitra. Tany aloha, raha 7 taona vao ahazoana vokatra ny foto-jirofo iray taorian’ny fambolena azy, dia efa misy karazan-jirofo ahazoana vokatra 4 taona monja taorian’ny nambolena azy. Fanamby ny famerenana ny maha Analanjirofo fa tsy nialan-jirofo.
Raha ny fijoroana vavolombelona nentin’i Laky Hely tantsaha mpamboly jirofo ao amin’ny fokontany Maromena kaominina Vohipeno distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana, dia raha 800 fototra ny jirofony teo aloha dia nahatratra 700 fototra jirofo ny zana-jirofo novolen’ny tamin’ny taon-dasa. Jirofo izay ambarany fa amelomany ny vady aman-janany sy ikarakarany ny fianaran-janany eny amin’ ny Oniversite miisa telo.
Anamboarana fanafody sy sigara
Anisany mampalaza ny jirofo ny fampiasana azy amin’ny fanamboarana sigara izay tena ankafizin’ireo Aziatika tokoa. Eo amin’ny sehatry ny fitsaboana dia mpampiasa azy betsaka ireo mpitsabo nify amin’ny alalan’ny fanamboarana fanafody fitsaboana nify.